दीपकले दिए दर्शक हराएको सूचना…! « Ramailo छ
दीपकले दिए दर्शक हराएको सूचना…!
आइतबार बिहान निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरीले आफ्नो फेसबुकमा वान लाइन अपुरो स्टाटस पोस्ट गरे । दर्शक हराएको सूचना… भनी दीपकले लेखेको स्टाटसमा सोमबार मध्यान्ह्सम्म करिब साढे चार हजार कमेन्ट आएका छन् ।
प्रतिक्रिया मध्ये निर्देशक दिनेश राउत दिपकको स्टाटसमा लेख्छन्, ‘हराएका दर्शकहरु दशैंमा भेटिने छन कि, छक्का पज्जा चार दशैं र तिहार भनेसी !’ दीपकको स्टाटस र दिनेशको प्रतिक्रियाको सिधा अर्थ, हाल हलमा दर्शक छैनन्, हलमा दर्शक तान्न बहुप्रतिक्षि फिल्म रिलिज हुनु पर्दछ । दिपकले लेखे जस्तै के हलमा दर्शक हराएकै हुन् त ?
वितरक गोपाल काजी कायस्थले पनि आइतबारै आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा हलमा दर्शक नभएको उल्लेख गर्दै चलिरहेका फिल्मलाई व्यांग्य हानेका छन् ‘हलमा दर्शक नभएर झिंगा धपाउँदै । हलमा दर्शक आउनको लागि फागुन १७ नै कुर्नु पर्ने भो । जय क्याप्टेन !’
गत शुक्रबार देखि हलमा तीन नेपाली फिल्महरु प्रदर्शनरत छन् । ‘गोपी’, ‘रणवीर’ र ‘सय कडा दश’ले दर्शक तान्न नसकेको वितरक र निर्माताको फेसबुक स्टाटसले प्रष्टै हुन्छ ।
अब के हलमा दर्शक आउन ‘क्याप्टेन’ या ‘छक्का पञ्जा ४’ नै लाग्नु पर्ने हो त ? बिचका अन्य फिल्मले कत्तिको दर्शक तान्लान् ?